‘म’ अपाङ्ग महिला हुँ तर, १४ बर्ष देखि नियमित से’क्स गर्ने गरेकी छु ! – Tufan Media News
‘म’ अपाङ्ग महिला हुँ तर, १४ बर्ष देखि नियमित से’क्स गर्ने गरेकी छु !
८ मंसिर २०७६, आईतवार २२:१६
काठमाडौं । इरानमा करिब एक करोड मानिस कुनै न कुनै अ’पाङ्गताबाट ग्रस्त छन् । रुढीवादी देश इरानमा से क्स जस्तो विषयमा कुरा गर्न वर्जित छ । यस्तोमा अ’पाङ्गता भएका महिलाको विषयमा से’क्सबारे सोच्न पनि सकिँदैन । उत्तरी इरानको एउटा सानो गाउँमा बस्ने ४१ वर्षकी अ’पाङ्गता भएकी महिला मितरा फराजदाहले आफ्नो अनुभव र निराशाबारे कुरा गरेकी छिन् । उनी भन्छिन्, ‘म एक महिला हुँ म एउटा यस्ती महिला हुँ जो ७५ प्रतिशत शारिरिक अपा’ङ्गताबाट ग्र’स्त छु ।
हो, मैले प्रेमको अनुभव गरेकी छु । म सधैं भन्ने गर्छु कि जसले कहिले पनि प्रेमको अनुभव गरेका छैनन् वा प्रेममा परेका छैनन् उनीहरु खेतमा चराहरुलाई डराउनका लागि राखिने पुतली जस्तै हुन् । ’११ वर्षको उमेरमा प्रेम : मितराका अनुसार उनी ११ वर्षको हुँदा आफ्ना एक छिमेकीका छोराका लागि विशेष भावना महसुस गरेकी थिइन् । उनी भन्छिन्, ‘यो भावनाको अर्थ मैले त्यतिबेला बुझ्न सकेकी थिइनँ ।’ उनी भन्छिन्, ‘त्यतिबेला म आफूलाई मान्छे नै होइन ठान्थें अ’पाङ्गताका कारण मेरो बाँच्ने अधिकार नै छैन जस्तो लाग्थ्यो ।
म ‘मृ’ त्युको प्रतिक्षा गरिरहेकी थिएँ ।’मितराका अनुसार १४ वर्षसम्म उनले आफ्नो प्रेम लुकाएर राखिन् । उनी भन्छिन्, ‘१४ वर्षको हुँदा मैले ती व्यक्ति र आफ्नो परिवारलाई यसबारे बताउने हिम्मत गरें । ती व्यक्तिले त मेरो प्रशंसा नै गरे तर उनको परिवारले यसमा स्विकारोक्ति दिएन । ’
‘केही वर्षसम्म त जिन्दगी नरक जस्तो भयो तर उनको प्रेमले मलाई आफूलाई नै प्रेम गर्न सिकायो ।’ ‘ती व्यक्तिसँग मैले ३० वर्षसम्म प्रेम गरेँ । यद्यपी, हामी कहिले पनि सँगै बसेनौं । म एक महिला हुँ जसलाई ती सबै कुराको आवश्यकता पर्छ जो एक महिलालाई हुन्छ ।’से क्स आवश्यकता : मितरालाई उनका प्रेमीले अँगालोमा बाँधुन् र उनको कपाल खेलाउन् भन्ने चाहना छ ।
उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो समाजमा यस्ता थुप्रै मानिसहरु छन् जसले सोच्छन् कि हामीजस्तो महिला प्रेमको लायक नै छैनन् । यो सुन्दा मलाई पीडा हुन्छ ।’उनी भन्छिन्, ‘म जसलाई प्रेम गर्छु, उनीसँग बस्न मेरा पिताले अनुमती दिँदैनन् । म जस्तै थुप्रै महिला यौ न र भावनात्मक आवश्यकतालाई दबाएका कारण पीडित छन् ।’‘म मान्छु कि सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन हामी भित्रैबाट आउँछ । हामीले आफ्नो यौ न आवश्यकता र सीमालाई स्विकार गर्नुपर्छ ।’मितरा आफ्नो पेन्टिङ बेचेर गुजारा गर्छिन् : मितरा भन्छिन्, ‘हामीले विश्वास गर्नुपर्छ कि हामी पूर्ण रुपमा बाँच्नका लागि हकदार छौं । हामीले अ’पाङ्गताको वास्ता नगरी यसको पूरा आनन्द लिनुपर्छ ।
’‘मैले अ’पाङ्गता भएका थुप्रै महिलालाई चिनेकी छु जसको परिवार यो कुराबाट अञ्जान छन् कि उनीहरु पनि यौ न प्राणी हुन् किनभने यी महिला आफैं पनि यो कुरामा विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । यदि तपाईं पनि प्रेमको हकदार हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईंको परिवारले कसरी विश्वास गर्नेछ ?’यौ न आवश्यकता पूरा नहुनु हानिकारक : मितरालाई आफ्नो भावना र आवश्यकतालाई जाहिर गर्न पाउँदा गर्व भएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘अहिले पनि धेरै मानिसहरु यो कुरामा विश्वास गर्छन् कि अपाङ्ग महिलाले आफ्नो यौन र भावनात्मक आवश्यकता व्यक्त गर्नु हुँदैन तर सत्य भने फरक छ ।’अ’पाङ्गता भएका मानिसहरुको यौ ”न ऊर्जा सामान्य मानिसभन्दा धेरै हुने मितरा बताउँछिन् ।
उनी भन्छिन्, ‘म जस्तो व्यक्तिका लागि यो सम्भव छैन किनभने मलाई ग’म्भीर शारिरिक अ’पाङ्गता छ ।’ मितरा भन्छिन्, ‘यदि अ’पाङ्गता भएका महिलाको यौ न आवश्यकता पूरा भएन भने यो निकै हा’निकारक हुनसक्छ ।’ बीबीसी
काठमाडौं : पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह तराई भ्रमणमा जाने भएका छन्। शाह निजी भ्रमणका लागि भैरहवा जान लागेका हुन्। उनी आगामी हप्ता भैरहवाको निजी भ्रमणमा जान लागेको उनको सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लखे गरिएको छ।
पूर्व श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव सरकार केही दिनको निजी भ्रमणको सिलसिलामा आगामी हप्ता पश्चिमको भैरहवा सवारी होइबक्सँदै छ’ सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।